WBO ummata Oromoof Abbooti Gadaati kenninee jira. Mootummaan nuuf institutional guarantee akka nuuf kenu gaafana. Obbo Daawud Ibsaa, – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWBO ummata Oromoof Abbooti Gadaati kenninee jira. Mootummaan nuuf institutional guarantee akka nuuf kenu gaafana. Obbo Daawud Ibsaa,
WBO ummata Oromoof Abbooti Gadaati kenninee jira. Mootummaan nuuf institutional guarantee akka nuuf kenu gaafana.
Obbo Daawud Ibsaa,
የእርቅ ስብሰባው ተጀምሯል እንድሳካ ፀሎታችንን እናሰማ
Fedhiin keenya qawwee ummata irraa guuru miti. Garuu biyya tokko keessaa qaamni lama hidhatee wali faana jiraachu hin danda’u. Oromoon bashananaaf qawwee baate bosona jiraatu jira jennee hin amanu. Oromoon hundi qabsoo ummataaf manaa bahe. Kanaafu kabajaa guddaa qabnaaf. Kabajaan akka manati deebi’an ni gargaara. Oromoon biyya bulchuu hin danda’u kan jedhamu suni akka iddoo argatu hin barbaadnu.
Dr Alemu Sime Feyisa!
Jawar Mohammed dubbii hunda guutummaatti xumuree jira!!!! Qabxii lamaan kana akka follow-up tti itti eda’uun fedha!
1. ABO: Lola dhaabuu labsee, meesha lafa kaa’ee, looltuu hundumaa bosona keessaa baasee, mooraatti galchee, boordii filannootti galmeeffamee, san booda naannnoo Oromiyaa keessatti karaa nagayaan filannoof of-qopheessuudhaaf hojii eegaluu qaba!
2. ODP: kan armaan olii Kana hunda ABOn yoo raawwate, ODP’nis lola labsee ture dhaabee, miseensotaa, deggertoota fi hoggantoota ABO hidhaa fi sodaachisuu tokko malee karaa bilisa ta’een sochii siyaasaa mirga guutuudhaan Oromiyaa keessatti akka gaggeessaniif gufuu fi takaallaa jiru hundumaa buqqisuu qaba.
3. ABBBOOTII GADAA: Qaamni kun dhimma kana hordofee ji’a ji’aan uummata beeksisuudhaan siyaasa naannoo keenyaa haala nagaa fi tasgabbii qabuun haga guyyaa filannoo biyyoollessaatti hordofuu qaba!
Mee maal jettu?????
Henok G Gaabbisaa